चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तयारी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं। चीनले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी अघि बढाएको छ। नेपाल–चीन दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १२ औं बैठकमा उच्चस्तरको भ्रमणबारे छलफल भएको छ। तर उच्चस्तरको भ्रमण कहिले हुने भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
चीनबाट राष्ट्रपति स्तरको भ्रमणका लागि नेपालले लगातार पहल गरिरहेको छ। जियाङ जेमिनले सन् १९९६ को डिसेम्बरमा दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। २०१२ को जनवरीमा प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ पाँच घण्टाका लागि नेपाल आएका थिए। राष्ट्रपति हु जिन्ताओ दुई कार्यमालमा नेपाल आएनन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि पहिलो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण आवश्यक ठानेनन्।
अदालतको आदेशपछि ४ सय बढी वंशजका नागरिकता रद्द
परासी । पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार सया बढी वंशजका नागरिकता रद्द गरेको छ ।
रद्द गरिएका नागरिकतालाई पुनः…
यो सडक कि धान रोप्ने खेत ? सरकारी जवाफ जनता चाहन्छन ?
काठमाडौं । बौद्ध–जोरपाटी–दक्षिणढोका–थली–साँखु सडक खण्डको मर्मत सम्भारका लागि सडक चौडा बनाउने काम शुरु भएको करिव दुई बर्ष हुदाँ समेत…
राष्ट्रियसभा उम्मेदवारले आज चिन्ह पाउने, दिउँसो ३ देखि ४ बजेका बीचमा नामावली प्रकाशन गरीने !
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निवर्माचनका उम्मेदवारलाई आज…